छोरीले गरिन्, बाबुको काजकिरिया
‘काजकिरियाका लागि छोरा नै चाहिन्छ किन ? त्यो काम छोरीले गर्न किन हुन्न ? यस्तो बिचार सानैदेखि मनभित्र खेलिरहन्थ्यो । बाबाको स्वर्गारोहण भएपछि किरिया कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जियो । छोरा नभएकाहरूको किरिया दाइभाइका छोराहरूले गरेको देखेकी थिएँ । तर, मैले समाजलाई एउटा उदाहरण दिनु थियो । छोरीले पनि छोराको अभाव मेट्न सक्छन् भन्ने देखाउनु थियो । त्यसैले यो जिम्मेवारी काँधमा उठाएँ’, घोराही–५ निवासी अन्सु नेपालीले भनिन्, ‘बाबुआमाका लागि छोरीले पनि छोरा जस्तै कर्म गर्न हुन्छ र सक्छन् पनि । समाजका लागि सुपाच्य नहोला तर, परिवर्तन आवश्यक छ ।’
छोराको अभावभन्दा पनि समाजलाई पितृसत्तात्मक सोचबाट माथि उठाउन यो प्रयास गरेको उनले सुनाइन् ।
दाङभ्याली कलेजमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत अन्सु स्वर्गीय राजुप्रसाद नेपालीकी माइली छोरी हुन् । उनका एक दिदी र एक बहिनी छन् । ‘दिदीको बिहे भइसकेको छ । बहिनी सानी छन् । पारिवारिक जिम्मेवारी आफैंले उठाउनु थियो, उठाएँ’, उनले सुनाइन् ।
दलित समुदाय अझ त्यसमा पनि बाबुको किरिया छोरीले गर्नु नौलो भए पनि सन्तानको धर्मका लागि आफूले यो साहस गरेको उनले सुनाइन् । आपूmले गरेको यो कर्म अरू छोरीहरूका लागि प्रेरणा बन्न सक्ने उनको आशा छ ।
आमा कमला नेपालीको भनाइ पनि उस्तै छ । तीन छोरीका बाआमा हाम्रा छोरा छैनन् । छोराले दिने माया ममता छोरीहरू दिए, धर्मकर्म पनि छोरा सरह नै निर्वाह गरे । समाजमा कोही कसैले छोरी किरिया बस्नु हुँदैन पनि भने होलान् तर छोरीले हिन्दु परम्परा नै बाबुको काजकिरिया गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘छोराको अभाव मात्रै होइन छोरीले कर्म समेत टारिन् ।’
प्रकाशित मिति : मंसिर ५, २०७७ शुक्रबार १४:२४:३,